Ngwaọrụ Kachasị mma maka Woocommerce Email Marketing | Martech Zone
Woocommerce bụ ihe kachasị ewu ewu na ịrụ ụka adịghị mma otu n'ime plugins eCommerce kacha mma maka WordPress. Ọ bụ ngwa mgbakwunye free nke dị mfe ma kwụ ọtọ iji melite ma jiri. Obi abụọ adịghị ya bụ ụzọ kachasị mma iji tụgharịa gị WordPress weebụsaịtị n'ime ụlọ ahịa e-commerce zuru oke!
Agbanyeghị, iji nweta ma jigide ndị ahịa, ịchọrọ karịa ụlọ ahịa eCommerce siri ike. You chọrọ ike atụmatụ ịzụ ahịa email n'otu ebe iji jide ndị ahịa ma mee ka ha bụrụ ndị na-azụ ahịa. Mana kedụ ihe bụ ire ahịa email?
Irere ahịa email na-ezo aka na ịbịakwute ndị ahịa site na email. Email ka nwere ROI kachasị mma nke ọwa ahịa ọ bụla. N'ezie, Marketingtù ahịa azụmaahịa na-akọ na ahịa ROI email bụ $ 43 maka dollar ọ bụla ejiri, na-eme ka ọ bụrụ ọwa ahịa ahịa kachasị dị irè maka ịre ahịa.
Ejiri ahia Email na ecommerce gaa:
Nyochaa ndị ahịa gị
Zụlite ndị ahịa na-adịghị njikere ịzụrụ ihe
Ree ndị ahịa ndị dị njikere ịzụta.
Na-akwalite ngwaahịa ndị ọzọ (dịka mmekọ mmekọ)
Mbanye okporo ụzọ gaa na ọkwa ọhụrụ / blog
Ihe kpatara Woocommerce ji bụrụ Top eCommerce Platform:
Woocommerce enwere ike iji ya ree ihe obula
Woocommerce bụ n'efu
Ihe ntukwasi obi kwesiri ntukwasi obi
Iche iche nke plugins ịhọrọ site na
Ndenye & mfe ịtọ-elu
Iji nyere gị aka ịmepụta usoro ịre ahịa email kachasị mma, anyị ga-ekekọrịta ngwaọrụ azụmaahịa 5 kacha elu; ịkwesịrị inweta ahịa email gị na-aga. Ya mere, ka na-amalite!
Ngwaọrụ 5 kacha mma maka Woocommerce Email Marketing
Nke a bụ akụrụngwa maka ijikọ saịtị gị na Mailchimp, otu n'ime ọrụ mgbasa ozi email kachasị ewu ewu dị. Ngwaọrụ a na - enyere gị aka iwulite ụdị, lelee nyocha na ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Mailchimp na-enye ndi na-ere ahia e-commerce oru ndi choro iji nyere aka megharia ahia. Ọ na-enye gị ohere ịmekọrịta onye ahịa gị na ịtụ data iji rụọ ọrụ na machibido mgbasa ozi ezubere iche. Nke kachasị mma? Ọ bụ kpam kpam free! Key atụmatụ:
Mepụta ụdị ndebanye aha ma tinye ha na saịtị WordPress gị
Jikọọ na ụdị ụdị dị iche iche na ngwa mgbakwunye e-commerce
Lelee akụkọ zuru ezu banyere mkpọsa gị
Zipu nkwuputa akpaka mgbe ndị debanyere aha ọhụrụ debanyere aha
Banye maka Mailchimp
Jilt bụ usoro ikpo okwu ozi-e-na-otu nke e wuru maka mkpa nke ụlọ ahịa WooCommerce. Site n'enyemaka nke ikpo okwu a, ị nwere ike izipu akwụkwọ akụkọ, nkwupụta ahịa, ozi ịntanetị na-akpaghị aka, nnata, ọkwa, na ndị ọzọ! Nwere ike ilekwasị anya na akpaaka, nkewa, na ozi ịntanetị azụmahịa, niile na-enweghị ịchụ àjà na njirimara imewe. Key atụmatụ na-agụnye:
Nwere njikọta WooCommerce.
Zipu nkwuputa ire ahia
Tinye cross-sells na upsell na ozi ịntanetị.
Akụkụ dabere na ịzụrụ ihe gara aga site na iji injin nkewa dị elu
Naghachi ego site na ozi ịntanetị gbahapụrụ agbahapụ.
Ihe ngosipụta zuru ezu maka email ọ bụla
Onye mmebe ozi email mara mma, ya na modul dina na dobe
Bido nyocha nke gị
3. Ndị na-eso ụzọ
Ihe na-esote bụ ngwá ọrụ ga - enyere gị aka ịkwado ndị ahịa gị nke ọma site na ịmepụta mkpọsa mgbagwoju anya dabere na mmasị ndị ọrụ, na ịzụta akụkọ ihe mere eme iji kpoo ahịa na itinye aka dị elu, ha niile na - enweghị ike ịgafe ọtụtụ ọwa ahịa. Key atụmatụ -agụnye:
Mee ka ndị na-eso ụzọ gaa mkpọsa
Sochie uru ndị ahịa bara
Zitere gị atụmanya tweets
Nchịkọta zuru ezu- (emeghe / clicks / eziga / wdg)
Mepụta ma jikwaa listi nzipu ozi
Free na omenala ndebiri
Kupọns ahaziri iche
Nchịkọta nchịkọta Google
Mepụta ihe ncheta
Download Ihe Ntinye Na-agbakwunye
Omnisend bụ ngwa ọrụ kachasị mma maka imepụta ozi ịntanetị akpaaka na akwụkwọ ntuziaka. Ebumnuche ya bụ iji nyere ndị azụmahịa eCommerce aka ka ahịa ha baa uru site na izigara onye ziri ezi ozi nke ahaziri, n'oge kwesịrị ekwesị, na-eji ọwa kwesịrị. Njirimara ịdọrọ-na-dobe na-emekọrịta ngwaahịa gị ma nye gị ohere itinye ozi ngwaahịa na akwụkwọ akụkọ gị na mkpọsa akpaaka. Key atụmatụ na-agụnye:
Ọ nwere njikọta WooCommerce.
Jikọta SMS, ozi ịntanetị ịkwalite, Facebook Messenger, na ọtụtụ ndị ọzọ na ngwakọta ahịa gị
Zipu ozi ziri ezi na-agakwuru onye ahịa ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị, oge ọ bụla na-eji akpaaka.
Mepụta ngalaba ndị na-agbanwe agbanwe dabere na njirisi gị
Can nwere ike ịmekọrịta kọntaktị site na nchekwa data WordPress gị.
Mepụta ọdịda peeji na popups mfe.
Sochie arụmọrụ arụmọrụ site na ọwa dị iche iche
Bido Nnwale Omnisend gị
5. Akwụkwọ Ozi
Mailpoet bụ ngwa ọrụ nwere ike ịba ọgaranya nwere ma nwekwaa nsụgharị n'efu na nke adịchaghị. Ọ bụ ọsụ ụzọ WordPress email nke ikpo okwu na-enye gị ohere ịme ihe niile site na WordPress dashboard. MailPoet na-ekwu na izipu ozi ịntanetị mara mma nke na-abanye igbe mbata oge ọ bụla ma mepụta ndị debanyere aha na-eguzosi ike n'ihe. Ezubere ikpo okwu maka ndị nwe saịtị na-arụsi ọrụ ike, na-enyere ha aka ịmalite na nkeji. Key atụmatụ na-agụnye:
MailPoet nwere ngwa mgbakwunye WordPress.
Nwere ike ịmepụta ụdị ndenye aha, ma tinye ya ebe ọ bụla ịchọrọ na saịtị gị.
Mee ozi ịntanetị site na ncha ma ọ bụ site na iji ndebiri dị iche iche
Mepụta ndepụta ndị debanyere aha dị iche iche, ma jikwaa ha n'ime WordPress
Zipu ozi ntinye aka na nnabata.
Banye maka MailPoet
Site na iji ngwa ahia na email ziri ezi na plugins, ị nwere ike ijikwa akụkụ niile nke ịre ahịa email ziri ezi site na ndebanye aha ụlọ, imepụta email, njikwa ndepụta, nyocha nchịkọta, na ndị ọzọ - ziri ezi na weebụsaịtị WordPress gị. Mepụta na ijikwa ozi ịntanetị akpaghị aka dị mfe, n'ihi ngwaọrụ ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Nwalee ngwá ọrụ, lee atụmatụ ha na atụmatụ ọnụahịa tupu ịhọrọ ngwá ọrụ kwesịrị ekwesị maka gị.
A na-atụ aro ka ị nwee otu ndị ọkachamara WordPress sitere na ụlọ ọrụ a tụkwasịrị obi dị ka Ndị ọkụ onye nwere ike ịghọta mgbagwoju anya nke azụmahịa n'ịntanetị. Ha nwere ike inyere gị aka wulite ụlọ ahịa eCommerce omenala gị yana yana inyere gị aka itinye mgbakwunye plugins ahịa email dị mkpa.
Ngosipụta: Anyị na-eji njikọ njikọta na edemede a.
Tags: mkpakọrịta ndị ahịaecommerceemail ecommerceecommerce n'elu ikpo okwuemail mwekotaemail Marketingozi emailndị na-esojel emailmailchimpAkwụkwọ oziamamawoocommerce
Olee otu na ihe kpatara ịdebanye aha nkesa ozi email maka akaụntụ Google